Nbili nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi na Nke Igwe | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 15, 2014 Kelsey Cox
Na-ewu ewu na-ewu ewu nke smartphones, ọtụtụ ndị na-eji ha mobile ngwaọrụ ịlele ha na-elekọta mmadụ akaụntụ karịa ha desktop. Ndị na-ere ahịa maara ihe na-erite uru ngbanwe a site na ịba ụba ego ha na azụmaahịa mkpanaka, yana ijikọ mgbasa ozi ha na-enweghị nsogbu na ntanetịime mmekọrịta nke ndị na-ege ha ntị na mgbasa ozi ala.
Na United States n'afọ gara aga, ejiri ihe karịrị ijeri $ 4.6 na mgbasa ozi mgbasa ozi, 35% nke bụ mgbasa ozi ụmụ amaala. A buru amụma na site na 2017, ọnụ ọgụgụ a ga-abawanye ihe ruru ijeri $ 11, yana mgbasa ozi nke ndị na-elekọta mmadụ gụnyere 58% nke mmefu ahụ. N'ọdịnihu dị nso, 66% nke ụlọ ọrụ, na 65% nke ndị na-ere ahịa, kwuru na ha nwere obere ihe ma ọ bụ yikarịrị ka ha ga-emefu na mgbasa ozi ala na ọkara nke abụọ nke afọ.
Na 2014, ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ga na-agbanwe mgbasa ozi mgbasa ozi ha na ntanetị. Ihe ka ọtụtụ ga-abawanye na-emefu ego na ekwentị, mgbasa ozi mmekọrịta, na mgbasa ozi dijitalụ, ebe eriri, mgbasa ozi, akwụkwọ akụkọ, na akwụkwọ akụkọ mba ga-ahụ oke nkwụsị.
Phew, nke ahụ bụ data dị oke egwu, eh? Luckily, LinkedIn agbaji onu ogugu enwere ugbua na amuma ihu ala n'okpuru anya aka. Ka ị na-echepụta ma na-emezigharị ego gị maka afọ ahụ, gbaa mbọ ka ị banye n’amụma na usoro a.
Tags: mgbasa ozidatainfographicmgbasa ozi mgbasa oziMobile na Mbadamba ụrọnwa amaalanwa afọ mgbasa ozimgbasa ozi na-elekọta mmadụSocial Media Marketing
Ọkt 30, 2017 na 2:37 AM
Kedu ụdị ngwa mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ụwa?